Online Marg | आफूले आफैंलाई महानायक घोषणा गर्ने भुवन केसीलाई लाग्यो ४४० भोल्टको झड्का, ‘डाँडाको वरपिपल’ को हलको हविगत बाहिरियो !
आफूले आफैंलाई महानायक घोषणा गर्ने भुवन केसीलाई लाग्यो ४४० भोल्टको झड्का, ‘डाँडाको वरपिपल’ को हलको हविगत बाहिरियो !
आफूले आफैंलाई महानायक घोषणा गरेका नायक भुवन केसीलाई हाइभोल्टेजको झड्का लागेको छ । उनी अभिनित चलचित्र डाडाको वरपिपलले पानी भन्न सम्म नपाएको हो ।
लामो समयपछि हल खुलेको उत्साह र दसैं–तिहारको माहोलले बिस्तारै दर्शक बढ्ने सम्भावना अझै बाँकी छ। तर आज ललितपुरको लबिम मलस्थित क्युएफएक्समा जे देखियो त्यसले नेपाली फिल्मले हलमा दर्शक तान्न अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने देखाएको छ। हाल यहाँ हलिउड फिल्म ‘नो टाइम टु डाइ’ र ‘फास्ट एन्ड द फ्युरियस’का साथमा नेपाली फिल्म ‘डाँडाको वरपिपल’ प्रदर्शन भइरहेको छ।
सोमबार डाँडाको वरपिपलले एक सो मात्र पाएको थियो। साढे तीन बजेको सो पाएको यो फिल्म हेर्न एक जना दर्शक पनि पुगेनन्। केसी अभिनित चलचित्र सुपरफ्लप भएको हो । राजधानीमा सिमसिम पानी परेकोले केही दर्शक घट्नु स्वभाविक हो। बिहीबारदेखि प्रदर्शनमा आएको नो टाइम टु डाइमा हिजोभन्दा केही दर्शक घटेका छन्।
गत वर्ष लकडाउन भएयता ५० भन्दा बढी फिल्म प्रदर्शनका लागि तयार छन्। तर यसबीच प्रदर्शनमा आएका ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’, ‘धन्दागिरी’ र ‘डाँडाको वरपिपल’को नाजुक अवस्थाले सिनेमा हलमा नेपाली फिल्मले बिना तयारी सजिलै दर्शक तान्न नसक्ने प्रष्ट भएको छ।